Gu’yaashii Gobdoon (AUN) W/D: Yusuf Garaad | Laashin iyo Hal-abuur
Gu’yaashii Gobdoon (AUN) W/D: Yusuf Garaad
Gu’yaashii Gobdoon (AUN)
Gobdon wuxuu ka mid ahaa mas’uuliyiintii badbaadiyay keydka cajaladaha ee Radio Muqdisho sannadihii faraha badnaa ee laba ama ka badan kooxood ama dowladood ay ka dagaallamayeen Muqdisho.
Howlihii ugu dambeeyay ee aan aniga iyo isagu ka wadaqeyb qaadannay waxay ahaayeen qaban qaabada xuska maalinta Afka Soomaaliga 2015, iyo talo ka bixinta howlaha ay tahay in la qabto si afka loo horumariyo iyo cidda ay tahay in ay qabato ka dib markii ay Madaxtooyadu na weydiisatay.
Cabdi wuxuu ugu weynaa dhowr walaalo ah oo Jaamiciyiin u badan oo ka shaqeeya Warfaafinta Qaranka, Radio iyo TV. Aabbahoodna sidoo kale wuxuu ka tirsanaa idaacadda oo uu wacdi diini ah ka soo jeedin jiray. Sidaa darteed wuxuu ka soo jeedaa qoys diineed, isaguna waxaa uu ahaa nin aan ku tilmaami karo in uu ku dhowdhowaa xerta iyo suufiyadda.
Sawirrada waxaa la socda fasiraadda uu qaarkood Gobdon ka bixiyay oo sidii uu isagu u qoray ah oo aan soo minguuriyay marka laga reebo saxitaan ama habayn aad u yar oo aan ku sameeyay.
abdi Xaaji Gobdon marka taariikhdiisa laga hadlo, waxaa laga dheehan karaa taariikhda warbaahinta Soomaaliya iyo heerarka ay soo martay
Waa xaafiis aan ku lahaa Madaxtooyadda Soomaaliya, waana waqtigii aan ahaa waryihii gaarka ah ee Madaxwe
eyne Maxamed Siyad Barre. Taariikhdu waa 1974.
Waa Madaxweyne Maxamed Siyad Barre iyo Gudoomiyih
ii Ururka Dhalinyarada aduunka ee nabada jecel iyo aniga oo w
akhtigaas ahaa waryah
a gaarka ah ee Jaalle Siyaad Barre. Taariikhdu waa 1975.
Waqtigaan waxaan wareeysi ka qaadaayay Madaxweyne Maxamed Siyad Barre oo uu wehliyo xoghayihii guud ee Midoowga Afrika. Sawirkaan waxa uu ahaa 1976 goobtuna waa Addis Ababa
Waa xarunta VOA ee dalka USA. Waqtigaan waxaan ka codsanaayay madaxda VOA in la sam eeyo Laanta Af Soomaaliga ee VOA, aniga oo xiligaas ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta. Taariikhdu waa1983.
W/D: Yusuf Garaad